စာအုပ်စင်လေးရယ် ဗမာ့အညာမနက်စာစစ်စစ်တွေရယ်နဲ့ ချစ်စရာဆိုင်ငယ်လေး "ဓလေ့"
စာအုပ်စင်လေးရယ် ဗမာ့အညာမနက်စာစစ်စစ်တွေရယ်နဲ့ ချစ်စရာဆိုင်ငယ်လေး “ဓလေ့”
28 Jun 2018 . 6:26 PM
ကိုယ်တို့ ဟိုးအရွယ်ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းပိတ်ရက်တွေရဲ့ အဖော်ဆိုတာ စာအုပ်တွေ၊ ကာတွန်းတွေပဲ ရှိခဲ့တာပါ။ ကျောင်းပိတ်ရက် မနက်ခင်း အိပ်ယာနိုးချိန် ဒီနေ့ခေတ်လို စားစရာမပေါများသေးခင် ၉၀ ပြည့်နှစ်လွန်တွေဟာ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲတို့အပြင် အိမ်ကလုပ်ပေးတဲ့ ထမင်းဆုပ်၊ ထမင်းဆီဆမ်းတို့နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရသူတွေချည်းပါပဲ။
အဲ့လိုငယ်စဉ်က အရသာကို အပြည့်အဝပြန်တူးဖော်လို့ရမယ့် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ရှာဖွေလို့ရနေပြီဆိုရင် ပျော်များပျော်သွားမလား။ ရှေးခေတ်နိုင်ငံကျော်တေးသံရှင်အဆိုတော်ကြီးတွေရဲ့ တဆွတ်ပျံ့ပျံ့တေးသံငြိမ့်ငြိမ့်လေးရယ်၊ စာအုပ်တွေ၊ ကာတွန်း၊ ဝတ္ထုတွေရယ်၊ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးရယ်၊ အိမ်လုပ်လက်ရာစစ်စစ် ဗမာမုန့်လေးတွေရယ် အကုန်လုံးတစ်စုတစ်စည်းတည်းရှိနေတဲ့ ဒီဆိုင်လေးကတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတာထက်ကို ပိုနေတဲ့ဆိုင်ကလေးပါ။
“ဓလေ့”တဲ့။ ဗမာဆန်ဆန်ချစ်စရာနာမည်လေးပါ။ ဆိုင်ငယ်လေးကတော့ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ပြည်သာယာလမ်း၊ အမှတ် ၃၄၅ မှာ ရှိတာပါ။ သင်္ကြန်မဆိုင်ခင်တည်းက ဒီဆိုင်လေးကို လာဖို့ ဓါတ်ကျနေပေမယ့် အသေးစားပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေလို့ ပိတ်ထားတာနဲ့ ခုမှရောက်ဖြစ်တော့တယ်။ ဆိုတော့ ဒီဆိုင်လေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းပုံလေးတွေကို တချက်ချင်း ပြောပြပေးသွားမယ်နော်။
ပထမဆုံးဆိုင်ရဲ့ အသွင်အပြင်လေးကစရမှာပဲ။ တစ်ဆိုင်လုံးက ဝါးနဲ့အလှဆင်ထားတာဆိုတော့ ဆိုင်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာကိုက အေးအေးချမ်းချမ်းသက်တောင့်သက်သာရှိနေသလိုပဲ။ ကားရပ်ရလည်း အဆင်ပြေတယ်။ အဲ့ဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်လေးက နေရတာလည်း ငြိမ်းအေးတယ်။
စာအုပ်စင်လေးကလည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ သေချာစီစဉ်ပေးထားတယ်။ စာအုပ်တွေမှ အများကြီး။
ရနိုင်တဲ့အစားအစာတွေကလည်း Menu List ကြည့်လိုက်မိတာနဲ့ကို ဆွတ်ပျံ့သွားစေတာမျိုး။ ဗမာမုန့်တွေ မစားရတာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက် ရိုးရာမုန့်စစ်စစ်လေးတွေအများကြီးက ဘယ်ဟာစားရမလဲ ဝေခွဲမရအောင်ပါပဲ။ မုန့်လိပ်ပြာ၊ မုန့်ကြာစိသာကူ၊ မုန့်လုံးကြီး၊ မုန့်ပစ်သလက်၊ မုန့်ဖက်ထုပ်၊ မုန့်ဗိုင်းတောင့်၊ ရွှေထမင်း၊ ပြာရေထုပ်၊ ဆလူမုန့်၊ အုန့်ကျွဲသဲ၊ ခေါက်မုန့်၊ ဌက်ပျောချိုကြော် စုံပလုံစိနေတဲ့ ဗမာမုန့်လေးတွေမြင်ရတာ တစ်ခုဆီကို မြည်းစမ်းချင်တဲ့စိတ်တွေ တဖွားဖွားပါပဲ။
ဆိုင်လေးက မနက်စာအဓိကနဲ့ ဗမာမုန့်တွေကို ဦးစားပေးရောင်းတာဆိုတော့ နေ့လည်စာအတွက်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ကိုယ်ကတော့ မနက်ခင်းလေးရောက်သွားတာဆိုတော့ ဆိုင်ရဲ့လူပြောများတဲ့ နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲလေးရယ်၊ ဆိတ်သားအာလူးကတ်တလိပ်ရယ်၊ ဘူးသီးငါးပေါင်းကြော်လေးရယ် မှာစားခဲ့ပါတယ်။
နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲကတော့ အရည်ကျဲကျဲ အရသာပေါ့ရွှတ်ရွှတ်တွေမကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို ထိမိမယ့်အရသာမျိုးပါပဲ။ တစ်ပန်းကန်အများကြီးထဲမှာ ဘဲဥဖတ်လေးတွေ၊ အသားတုနဲ့ ကြက်သားအကြွပ်ကြော်လေးတွေ၊ ကြက်သွန်နီဥအိအိနဲ့ မွှေးပြီးဆိမ့်နေတာမို့ ကြိုက်တယ်ဆိုတာထက်ကို ပိုပါတယ်။ အိမ်နားမှာရှိရင် ထပ်ခါထပ်ခါစားမိမှာပဲ။ ၁၅၀၀ ပါတဲ့။
ဆိတ်သားအာလူးကတ်တလိပ်ဆိုတာလည်း ကတ်တလိပ်အတုံးအထူကြီးနဲ့ မျက်စိရှေ့ကို မှာပြီးမကြာဘူးရောက်ချလာပါရောလား။ အာလူးသားချည်းပဲကြိတ်ပြီး အထဲက ဆိတ်သားနဲ့အာလူးကို ဌာပနာထားတဲ့ ဒီအာလူးကတ်တလိပ်ကတော့ ပူပူနွေးနွေးဗိုက်တင်းအောင်စားရမယ့်အမျိုးပါပဲ။ မဆလာနံ့လေးလည်း သင်းနေရောလေ။ ၂၅၀၀ ကျပါတယ်။
ဘူးသီးငါးပေါင်းကြော်ကတော့ ကြက်သွန်နီနဲ့ဘူးသီးချောင်းလေးတွေကို မုန့်နှစ်နိုင်နိုင်နဲ့ကြော်ထားတာဆိုတော့ မိုးအေးအေးမှာ ရေနွေးကြမ်းမွှေးမွှေးလေးနဲ့ တဖူးဖူးမှုတ်သောက်ရင်း စားမြိန်စရာပါပဲ။ ၁၂၀၀ ကို ၃ ခုလောက်ပါပါတယ်။ အရသာတော့ အကြိုက်မတွေ့လှပါဘူး။
ဆိုင်လေးက ဘာမှာမှာ မှာမှကြော်ပေးတာဆိုတော့ အချိန်ခနတော့စောင့်ရပါတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်သွားခဲ့တုန်းကတော့ မနက်ခင်းမုန့်အချိုတွေအော်ဒါရောင်းလိုက်ရလို့ စားချင်တဲ့ဗမာမုန့်တွေတစ်ခုမှမစားခဲ့ရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုချစ်စရာဆိုင်လေးမှာ တစ်နေကုန် စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီး ခေတ်ဟောင်းသီချင်းငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ ၉ဝပြည့်နှစ်တွေဆီပြန်သွားဖို့ဆို “ဓလေ့” ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးက ကိုယ်တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝကို ပြန်ခေါ်သွားဖို့ အသင့်ပဲဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ၉၀ ပြည့်နှစ်တွေကို ကိုယ့်လိုလွမ်းနေသူတွေများ ရှိရင် ဓလေ့ မှာ ပြန်တမ်းတလိုက်ကြပါစို့လား။
ဆိုင်ကလေးကို မနက် ၆ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီထိ ဖွင့်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို ကြာသပတေးတစ်ရက်တော့ ပိတ်ပါတယ်။ လာဖို့လမ်းသေချာမသိရင် သင်္ကန်းကျွန်းပြည်သာယာလမ်း၊ အထက (၂) ကျောင်းရှေ့တည့်တည့်မှာပါပဲနော်။
စာအုပျစငျလေးရယျ ဗမာ့အညာမနကျစာစဈစဈတှရေယျနဲ့ ခဈြစရာဆိုငျငယျလေး “ဓလေ့”
ကိုယျတို့ ဟိုးအရှယျငယျငယျတုနျးက ကြောငျးပိတျရကျတှရေဲ့ အဖျောဆိုတာ စာအုပျတှေ၊ ကာတှနျးတှပေဲ ရှိခဲ့တာပါ။ ကြောငျးပိတျရကျ မနကျခငျး အိပျယာနိုးခြိနျ ဒီနခေ့တျေလို စားစရာမပေါမြားသေးခငျ ၉၀ ပွညျ့နှဈလှနျတှဟော ကောကျညှငျးပေါငျး၊ မုနျ့ဟငျးခါး၊ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲတို့အပွငျ အိမျကလုပျပေးတဲ့ ထမငျးဆုပျ၊ ထမငျးဆီဆမျးတို့နဲ့ ကွီးပွငျးခဲ့ရသူတှခေညျြးပါပဲ။
အဲ့လိုငယျစဉျက အရသာကို အပွညျ့အဝပွနျတူးဖျောလို့ရမယျ့ ဆိုငျလေးတဈဆိုငျကို ရနျကုနျမွို့ထဲမှာ ရှာဖှလေို့ရနပွေီဆိုရငျ ပြျောမြားပြျောသှားမလား။ ရှေးခတျေနိုငျငံကြျောတေးသံရှငျအဆိုတျောကွီးတှရေဲ့ တဆှတျပြံ့ပြံ့တေးသံငွိမျ့ငွိမျ့လေးရယျ၊ စာအုပျတှေ၊ ကာတှနျး၊ ဝတ်ထုတှရေယျ၊ တိတျတိတျဆိတျဆိတျပတျဝနျးကငျြလေးရယျ၊ အိမျလုပျလကျရာစဈစဈ ဗမာမုနျ့လေးတှရေယျ အကုနျလုံးတဈစုတဈစညျးတညျးရှိနတေဲ့ ဒီဆိုငျလေးကတော့ ခဈြဖို့ကောငျးတာထကျကို ပိုနတေဲ့ဆိုငျကလေးပါ။
“ဓလေ့”တဲ့။ ဗမာဆနျဆနျခဈြစရာနာမညျလေးပါ။ ဆိုငျငယျလေးကတော့ သင်ျကနျးကြှနျးမွို့နယျ၊ ပွညျသာယာလမျး၊ အမှတျ ၃၄၅ မှာ ရှိတာပါ။ သွင်ျကနျမဆိုငျခငျတညျးက ဒီဆိုငျလေးကို လာဖို့ ဓါတျကနြပေမေယျ့ အသေးစားပွငျဆငျမှုတှလေုပျနလေို့ ပိတျထားတာနဲ့ ခုမှရောကျဖွဈတော့တယျ။ ဆိုတော့ ဒီဆိုငျလေးရဲ့ ခဈြစရာကောငျးပုံလေးတှကေို တခကျြခငျြး ပွောပွပေးသှားမယျနျော။
ပထမဆုံးဆိုငျရဲ့ အသှငျအပွငျလေးကစရမှာပဲ။ တဈဆိုငျလုံးက ဝါးနဲ့အလှဆငျထားတာဆိုတော့ ဆိုငျခနျးကဉျြးကဉျြးလေးထဲမှာကိုက အေးအေးခမျြးခမျြးသကျတောငျ့သကျသာရှိနသေလိုပဲ။ ကားရပျရလညျး အဆငျပွတေယျ။ အဲ့ဆိုငျပတျဝနျးကငျြလေးက နရေတာလညျး ငွိမျးအေးတယျ။
စာအုပျစငျလေးကလညျးအဖွဈမဟုတျဘဲ သခြောစီစဉျပေးထားတယျ။ စာအုပျတှမှေ အမြားကွီး။
ရနိုငျတဲ့အစားအစာတှကေလညျး Menu List ကွညျ့လိုကျမိတာနဲ့ကို ဆှတျပြံ့သှားစတောမြိုး။ ဗမာမုနျ့တှေ မစားရတာတျောတျောကွာခဲ့ပွီဖွဈတဲ့သူတှအေတှကျ ရိုးရာမုနျ့စဈစဈလေးတှအေမြားကွီးက ဘယျဟာစားရမလဲ ဝခှေဲမရအောငျပါပဲ။ မုနျ့လိပျပွာ၊ မုနျ့ကွာစိသာကူ၊ မုနျ့လုံးကွီး၊ မုနျ့ပဈသလကျ၊ မုနျ့ဖကျထုပျ၊ မုနျ့ဗိုငျးတောငျ့၊ ရှထေမငျး၊ ပွာရထေုပျ၊ ဆလူမုနျ့၊ အုနျ့ကြှဲသဲ၊ ခေါကျမုနျ့၊ ဌကျပြောခြိုကွျော စုံပလုံစိနတေဲ့ ဗမာမုနျ့လေးတှမွေငျရတာ တဈခုဆီကို မွညျးစမျးခငျြတဲ့စိတျတှေ တဖှားဖှားပါပဲ။
ဆိုငျလေးက မနကျစာအဓိကနဲ့ ဗမာမုနျ့တှကေို ဦးစားပေးရောငျးတာဆိုတော့ နလေ့ညျစာအတှကျတော့ အဆငျမပွပေါဘူး။ ကိုယျကတော့ မနကျခငျးလေးရောကျသှားတာဆိုတော့ ဆိုငျရဲ့လူပွောမြားတဲ့ နို့စိမျးခေါကျဆှဲလေးရယျ၊ ဆိတျသားအာလူးကတျတလိပျရယျ၊ ဘူးသီးငါးပေါငျးကွျောလေးရယျ မှာစားခဲ့ပါတယျ။
နို့စိမျးခေါကျဆှဲကတော့ အရညျကြဲကြဲ အရသာပေါ့ရှတျရှတျတှမေကွိုကျတတျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ တကယျ့ကို ထိမိမယျ့အရသာမြိုးပါပဲ။ တဈပနျးကနျအမြားကွီးထဲမှာ ဘဲဥဖတျလေးတှေ၊ အသားတုနဲ့ ကွကျသားအကွှပျကွျောလေးတှေ၊ ကွကျသှနျနီဥအိအိနဲ့ မှေးပွီးဆိမျ့နတောမို့ ကွိုကျတယျဆိုတာထကျကို ပိုပါတယျ။ အိမျနားမှာရှိရငျ ထပျခါထပျခါစားမိမှာပဲ။ ၁၅၀၀ ပါတဲ့။
ဆိတျသားအာလူးကတျတလိပျဆိုတာလညျး ကတျတလိပျအတုံးအထူကွီးနဲ့ မကျြစိရှကေို့ မှာပွီးမကွာဘူးရောကျခလြာပါရောလား။ အာလူးသားခညျြးပဲကွိတျပွီး အထဲက ဆိတျသားနဲ့အာလူးကို ဌာပနာထားတဲ့ ဒီအာလူးကတျတလိပျကတော့ ပူပူနှေးနှေးဗိုကျတငျးအောငျစားရမယျ့အမြိုးပါပဲ။ မဆလာနံ့လေးလညျး သငျးနရေောလေ။ ၂၅၀၀ ကပြါတယျ။
ဘူးသီးငါးပေါငျးကွျောကတော့ ကွကျသှနျနီနဲ့ဘူးသီးခြောငျးလေးတှကေို မုနျ့နှဈနိုငျနိုငျနဲ့ကွျောထားတာဆိုတော့ မိုးအေးအေးမှာ ရနှေေးကွမျးမှေးမှေးလေးနဲ့ တဖူးဖူးမှုတျသောကျရငျး စားမွိနျစရာပါပဲ။ ၁၂၀၀ ကို ၃ ခုလောကျပါပါတယျ။ အရသာတော့ အကွိုကျမတှလှေ့ပါဘူး။
ဆိုငျလေးက ဘာမှာမှာ မှာမှကွျောပေးတာဆိုတော့ အခြိနျခနတော့စောငျ့ရပါတယျ။ ကိုယျ့အလှညျ့သှားခဲ့တုနျးကတော့ မနကျခငျးမုနျ့အခြိုတှအေျောဒါရောငျးလိုကျရလို့ စားခငျြတဲ့ဗမာမုနျ့တှတေဈခုမှမစားခဲ့ရပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ ဒီလိုခဈြစရာဆိုငျလေးမှာ တဈနကေုနျ စာအုပျလေးတှဖေတျပွီး ခတျေဟောငျးသီခငျြးငွိမျ့ငွိမျ့လေးနဲ့ ၉ဝပွညျ့နှဈတှဆေီပွနျသှားဖို့ဆို “ဓလေ့” ဆိုတဲ့ဆိုငျလေးက ကိုယျတို့ရဲ့ ငယျဘဝကို ပွနျချေါသှားဖို့ အသငျ့ပဲဆိုတာ ယုံကွညျပါတယျ။ ၉၀ ပွညျ့နှဈတှကေို ကိုယျ့လိုလှမျးနသေူတှမြေား ရှိရငျ ဓလေ့ မှာ ပွနျတမျးတလိုကျကွပါစို့လား။
ဆိုငျကလေးကို မနကျ ၆ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီထိ ဖှငျ့ပါတယျ။ တဈပတျကို ကွာသပတေးတဈရကျတော့ ပိတျပါတယျ။ လာဖို့လမျးသခြောမသိရငျ သင်ျကနျးကြှနျးပွညျသာယာလမျး၊ အထက (၂) ကြောငျးရှတေ့ညျ့တညျ့မှာပါပဲနျော။
by Lwin Moe Htike . 1 month ago